Maxkamada Sare Maraykanka Oo Ansixisay Xayiraadii Socdaalka Muslimiinta Ee Donald Trump | Hangool News
Maxkamada Sare Maraykanka Oo Ansixisay Xayiraadii Socdaalka Muslimiinta Ee Donald Trump
June 27, 2018 - Written by Hangool News 1
Maxkamada ugu sareysa ee dalka Maraykanka ayaa Salaasadii shalay ugu danbeyn ansixisay xayiraadii Socdaalka ee uu Donald Trump dul dhigay Muslimiinta kasoo jeeda lix wadan oo Islaam ah, wareegtadaasi oo salka ku heysa Muslim naceybka xukuumada Trump.
Trump ayaa xiligii uu doorashada ku jiray Bishii December 2015 horey u sheegay inuu muslimiinta ka mamnuuci doono inay yimaadaan dalka Maraykanka.
Sharcigan ayaa markiisii ugu horeyey ee lasoo saaro lagu sheegay in dadka kasoo jeeda dalalka Islaamka ah ee Soomaaliya, Liibiya, Sudan, Chad, Yemen, Syria, Iraq iyo Iran aysan socdaal ku imaan karin dalka Maraykanka.
Dhaqan gelinta sharcigan ayey xiisad weyn ka dhalatay iyo banaanbaxyo shacabka dhigeen, waxaa sidoo kale Madaarada dalkaasi laga celiyey dad xataa heysta degenaanshaha Green Card-ka Maraykanka oo kasoo jeeda dalalka isir-sooca lagu sameeyey, waxayna maxkamadaha Federaalka laaleen xayiraadan sadex goor.
Xukuumada ayaa isbedalo kooban ku sameysay sharcigan, waxaana laga saaray listiga dalal dhowr ah oo ay kamid yihiin Iraq, Sudan iyo Chad, iyadoo lagu daray ugu danbeyntii wadamada Kuuriyada Waqooyi iyo Venezuela.
Maxkamada sare oo bilihii lasoo dhaafay kiiskan eegaysay ayey 9 Garsoore ku kala qeyb sameen, 5ta Garsoore ee taageera xisbi Xaakimka Jamhuuriga ayaa ansixiyey sharcigan, halka 4ta Garsoore ee kale ay si adag uga soo horjeesteen.
Donald Trump ayaa go’aankan ku tilmaamay guul weyn, wuxuuna go’aankan mugdi weyn gelinayaan dadka qaxootiga ahaa ee rajada ka qabay in la geeyo dalka Maraykanka.